Soo dejisan Malwarebytes 4.3.0.206 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Malwarebytes
Malwarebytes – software ah in la ogaado oo baabbi’in modules spyware kala duwan. software The ilaaliya computer ka Gooryaanka, Trojans, fayrusyada file, spyware, iwm Malwarebytes Anti-Agab leeyahay shaqo ah scan deg deg ah si loo hubiyo goobaha muhiimka ah nidaamka iyo in meel la furin ee aaga karantiil ah. software The u saamaxaaya in ay dar files gaar ah ama fayl ee liiska, kaas oo la iska indho halka dhowr. Malwarebytes Anti-Agab leeyahay feature a in aan bilowno software ah, xitaa inta ay ku furid by furin ah.
Ogaanshaha iyo ka saareen of modules spyware ah
Iskaanka aaladaha kaydinta xogta
Soo dejisan Malwarebytes
Faallo ku saabsan Malwarebytes
Malwarebytes Xirfadaha la xiriira
SameMKV – waa fududahay in la isticmaalo softiweer si loogu beddelo waxa ku jira DVD iyo disk-yada diskiyada qaab MVK ah. Software-ka ayaa kaydinaysa metadata iyo qaybaha macluumaadka ee disk-ga.